Maxaa lagu xasuusan Kibaki? - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Maxaa lagu xasuusan Kibaki?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Febraayo, 2013, 18:11 GMT 21:11 SGA
Ka dib muddo 10 sanno ah oo uu hoggaaminayey dalka Kenya, ayuu madaxweyne Mwai Kibaki, waxa uu xilka baneyn doonaa ka dib doorashooyinka Nenya ka dhici doona afarta bisha Maarso ee sannadkan 2013-ka.
Madaxweyne Kibaki waxa uu dalka Kenya ka talinyaya 10 sano
Waxa lagu soo doortay cod caqlabiyad buuxda ah 2002-dii oo mowjaddo iyo is bahaysi isbeddel doon ah ay soo afjartay xukunkii madxweynihii hore ee Danel Arab Moi oo muddo 24 sanno ah ka talinayey Kenya.
Haddaba Kibaki maxaa uu ka tagay oo lagu xasuusan karaa?